क्षयरोगका कारण नेपालमा वार्षिक ‘पाँच हजारको मृत्यु’  BRTNepal
क्षयरोगका कारण नेपालमा वार्षिक ‘पाँच हजारको मृत्यु’
बिआरटीनेपाल २०७५ चैत ९ गते ९:१६ मा प्रकाशित
‘समय अबको, क्षयरोग अन्त्यको’ भन्ने नारासहित विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा पनि चैत १० गते मनाइने भएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी क्षयरोगका कारण नेपालमा वार्षिक ५ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकाअनुसार नेपालमा वर्षे्नि क्षयरोगका ४५ हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन् । नयाँ र पुराना गरी नेपालमा ६० हजार क्षयरोगका बिरामी रहेको अनुमान छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले भने वार्षिक ३२ हजार ४७४ जना नयाँ बिरामी उपचारको दायरामा ल्याएको जनाएको छ । जसमा ६४ प्रतिशत पुरुष, ३६ प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले स्थानीय र प्रदेश सरकार क्षयरोग नियन्त्रण गराउने अभियानमा सहभागी भए समयमा औषधि ढुवानी हुने र क्षयरोग नियन्त्रण गराउन सकिने बताउनुभयो । हाल देशका चार हजार ३ सय २३ उपचार केन्द्रबाट क्षयरोगको औषधि निःशुल्करुपमा दिने गरिएको छ । नियमित औषधि सेवन गर्ने र खानपान तथा जीवनशैलीमा विशेष ध्यान पुर्याए क्षयरोग पूर्णरुपमा निको हुने रोग हो ।
नेपालमा पहिलोपटक माइक्रोवेभ एब्लेशनबाट मृगौला ट्युमरको उपचार सुरू
विमानस्थलमा औषधी थन्किदा डोल्पामा विरामीको विचल्ली
लुम्विनी मेडिकल कलेजवाट जन्मिएको ४ घण्टामै शिशु गायब!
घुँडा दुख्छ ? कागतीको प्रयोग गर्नुस्
डा. केसीद्धारा आन्दोलनको चेतावनी
चिकित्सकमाथि हुने दुब्र्यवहारका घटना न्यून गर्ने विषयमा छलफल
नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक
३६ पटक फेल भएका पनि डाक्टर, काउन्सिलको परिक्षा पास गर्न नसकेपछि आन्दोलन
धादिङमा पास्नीको भोज खाँदा ३७ जना बिरामी
‘सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न नपाइने’